I-China i-Gas Steam Boiler abavelisi kunye nabaxhasi | Iiringi ezibini
Irhasi Steam Boiler WNS uthotho lweentsimbi zesitshizi esitshisa ioyile okanye igesi kukudityaniswa kwangaphakathi kwezinto ezintathu zokubuyisa umlilo, ukuhambisa isitya se-boiler kwimozulu emileyo, ubushushu obuphezulu, irhasi ukujikisa ipleyiti yesibini neyesithathu yomsi wokucofa umsi emva koko kwigumbi lomsi . Ukukhutshelwa ngaphandle kwi-chimney.
Ubungakanani: I-0.5T / h ~ 50T / h
Uhlobo: I-Steam Boiler
Uxinzelelo: Ubungakanani: 0.1Mpa ~ 3.8Mpa
Isibaso: IGesi yeNdalo, i-LPG, ukuSebenzisa iGesi, iDiesel, ioyile enzima, iPetroli ezimbini (iGesi okanye ioyile) njl.
Ukusetyenziswa kweshishini: Ukutya, istayile, iPlywood, iphepha, iibrewery, iicicemill, ukuprintwa & ukudaya, ukutya kwenkukhu, iswekile, ukupakisha, izinto zokwakha, amachiza, igalikhi, njl njl.
WNS series kwibhoyila umphunga oyile okanye igesi i Horizontal lwangaphakathi yokutsha ezintathu backhaul umlilo ityhubhu kwibhoyila, isebenzisa ibhoyila eziko ubushushu emanzi isakhiwo, ubushushu eliphezulu umsi, irhasi ithuba ukuhlahlela ityhubhu yesibini kunye neyesithathu backhaul ityhubhu ipleyiti, emva kwegumbi lomsi. Ukukhutshelwa ngaphandle kwi-chimney.
Kukho umphambili kunye nomva weSmokebox Cap kwibhoyila, kulula ukuyigcina.
Isitshisi esibalaseleyo sisebenzisa ukutsha kohlengahlengiso lomlinganiso, ulawulo lwamanzi oluzenzekelayo, ukuqala kunye nokuyeka inkqubo, ukusebenza okuzenzekelayo kunye nobunye ubuchwephesha, ikwanayo nenqanaba eliphezulu kunye nelisezantsi lamanzi kunye nomsebenzi wokukhusela amanqanaba amanzi asezantsi kakhulu, uxinzelelo oluphezulu, cima njl.
I-boiler ineempawu zesakhiwo se-compact, ekhuselekileyo nenokuthenjwa, ukusebenza ngokulula, ukufakela ngokukhawuleza, ungcoliseko oluncinci, ingxolo ephantsi kunye nokusebenza okuphezulu.
Isakhiwo se-1.Overall isengqi kwaye icompact, kulula ukuyifaka.
I-boiler idityaniswa ngumzimba we-Boiler, i-chimney kunye nenkqubo yombhobho. Umzimba webhoyila kunye netshimini sele ugqityiwe kumzi-mveliso, umbhobho, ivelufa kunye negeji kwibhoyila nazo zigqityiwe kumzi-mveliso. Abaxumi badinga kuphela ukudibanisa i-boiler kunye ne-chimney kunye, ukudibanisa igesi, amandla, amanzi kunye emva koko
ukuvavanya ukuqhuba, ukunciphisa ixesha lokufaka, kunye nokuqinisekisa umgangatho webhoyila.
2. Uyilo oluphambili, lonke ulwakhiwo, igumbi lokudibanisa kunye nezinto ezingaphezulu kwisithsaba sebhokisi yomsi ongaphambili, umzimba unendawo yokufudumeza kunye negumbi lokudibanisa. Ubume obufanelekileyo, ubumbano, ukusetyenziswa okuncinci kwentsimbi, inyongo yomlilo yinyani yomlilo, isambatho sokugquma sisixhobo esitsha sokufakelwa kwe-thermal, iphepha lokupakisha umbala, ubume bokupakisha buxande, ukusebenza kwebhoyila, ubunzima, ulwakhiwo, ubungakanani, Imodeli yokumila imodela iqhubela phambili ngakumbi nembono.
Isixhobo samanzi esondla sixhobise kwicala lasekunene lesiseko se-boiler, sonke isakhiwo, asidingi esinye isiseko.
3. Umjikelo wamanzi olula, ulwakhiwo olunengqiqo lweenxalenye zoxinzelelo, uqinisekisa umgangatho wamanzi, okhuselekileyo ukubaleka
4. Gcwalisa izixhobo ezincedisayo, ubuchwepheshe obuphambili obuphambili
I-WNS Steam Boiler evutha ioyile okanye igesi
UmzekeloInto WNS0.5-0.7-YQ WNS1-0.7-YQ I-WNS2-1.25-YQ WNS4-1.25-YQ I-WNS6-1.25-YQ
Ikaliwe amandla T / h
Ikaliwe Uxinzelelo lokusebenza
Ikaliwe iSteam Temp. ℃
Kondla iTemplate yaManzi. ℃
Umphezulu wokufudumeza m²
Ubungakanani obuphindwe kabini
Ibhoyila Ubunzima Ton
Umthombo wamandla V I-380V / 50Hz
Imodeli yoMpompo waManzi
Ukusebenza ngokufanelekileyo kwe-Thermal
UkuKhanya kweoyile / ngeoyile enzima / ngeGesi yeDolophu / ngeGesi yendalo
AmafuthaUkusetyenziswa Ioyile yokuKhanya
Irhasi yendalo I-144.16
< IBakala 1
UmzekeloInto WNS8-1.25-YQ I-WNS10-1.25-YQ WNS15-1.25-YQ WNS20-1.25-YQ
I-Weishaupt / NU-INDLELA
Edlulileyo: I-Boiler yeSteam yeOpera
Okulandelayo: I-Vertical Wood / i-Boiler yamalahle
china igesi yokubhabha isitya
I-china lpg kwibhoyila
Igesi ebilisiwe i-boiler, i-boiler esebenzayo
igesi ibheyila umphunga ompompoza
I-lpg entshontsho yesitshizi
i-boiler yendalo yendalo
irhasi yendalo i-boiler
Ibhoyimitha yomphunga ongatshatanga
Intshayelelo: I-Drum yeCandelo elinye lamalahle atshisayo kwibhoyila ibhoyila yomqolo wamanzi amathathu emva komlilo. Lungisa ityhubhu yomlilo kwisigubhu kunye nodonga lwamanzi wombhobho oqinileyo ulungelelaniswe kwicala lasekunene nangasekhohlo lesithando. Ngomtya omninzi we-ket stoker yokutyisa ngoomatshini kwaye ngofundayo oyilwayo kunye nesitshizi somoya wokungena komoya, qaphela umatshini ophulukana nokukhuphelwa kweer slag. I-hopper ye-oyile yehla kwi-bar bar, emva koko faka isithando sokutsha, kwigumbi lomlotha ngaphezulu kwe-arch yangasemva, ...